Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Ny vanim-potoanan'ny fanombohana fiaramanidina afara
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • teknolojia
Miaraka amin'ny fitomboan'ny sain'ny indostria rehetra hiasa amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy hampihena ny famoahana CO2 manerantany, ny mety ho an'ireo mpilalao vaovao amin'ny haitao fiaramanidina dia tsy mbola lehibe lavitra.
Rehefa mandroso ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy ho ampy ny fepetra kasaina hataon'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina amin'izao fotoana izao. Fandinihana vaovao misy sarintany 40 fanombohana mampanantena amin'ny sehatry ny fiaramanidina maharitra.
Ny topy topy amin'ny sarintany Sustainable Aero Lab Fanombohana mampanantena 40, clustering aviation maharitra amin'ny sehatra teknolojia efatra: Sustainable Aviation Fuels (SAF), Electric Propulsion, Hydrogen, ary ny Digital Backbone.
Izy io koa dia mijery ny famatsiam-bola amin'ny renivohitra miditra amin'ny teknolojia tsy misy emission, sehatra iray nahazo tombony lehibe tao anatin'ny enin-taona lasa, saingy hatreto dia saro-kenatra hifandray amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina, indrindra raha ny fizarana sarotra toy ny hidrogen .
Ny Sustainable Aero Lab dia mifantoka amin'ny fanafainganana ny fanombohana ary nanome torolàlana ireo mpanombohana isaky ny sehatra voatanisa amin'ity fandalinana ity hatramin'ny volana febroary 2021. Ny sasany amin'ireo manam-pahaizana malaza indrindra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiaramanidina dia efa niditra ho mpanoro hevitra.
Stephan Uhrenbacher, mpanorina sy CEO an'ny Sustainable Aero Lab: “Ireo vao manomboka nahazo ny sain'ny olona indrindra amin'ny aerospace dia ny fanaovana dia an-habakabaka sy fiarakaretsaka an'habakabaka an-tanàn-dehibe. Raha ireo vokatra ireo dia natao hamoahana zavatra manidina sy hanomezana fahafaham-po ny fanirian'olombelona, na ny taxi-be na ny fametrahana olona marobe eny amin'ny habakabaka dia samy miatrika ny olana manoloana ny fiaramanidina ara-barotra: mila lasa tsy misy karbaona ny sidina. Ary mila mitranga haingana kokoa noho ny inoan'ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny indostria izany. Manokatra toerana ho an'ny fanombohana izy io mba hanomezana singa ho an'ny fiaramanidina ho avy na koa ny fiaramanidina manontolo, fa koa ny fomba fiasa vaovao. "
“Ny sidina manidina dia miditra mivantana amin'ny krizy amin'ny toetrandro. nefa ny ankamaroan'ny indostria dia mifantoka amin'ny fampihenana na fampihenana ny fandefasana entona, fa tsy ny fanesorana azy ireo tanteraka. Tsy misy fotoana sisa handraisana an'ity fomba fampitomboana ity; ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia miha hita sy misy akony amin'ny fiainantsika isan'andro. Mila vahaolana matanjaka izay afaka mandefa ny fivezivezivezena ara-barotra maimaimpoana isika ato anatin'ny folo taona ho avy raha manana fanantenana hahatratra ny tanjon'ny Fifanarahana tany Paris izahay. Ny vaovao tsara dia misy izany vahaolana izany ary maneho ny fahafaha-manao tsena goavana, ” Paul Eremenko, CEO ary mpiara-manorina ny Universal Hydrogen, ary mpanolo-tsaina ao amin'ny Sustainable Aero Lab. Miaraka amin'ny fanombohany manokana, Universal Hydrogen, ny CTO taloha an'ny Airbus ary ny United Technologies dia mitana andraikitra mavitrika amin'io asa io ihany.
Ianao dia afaka tadiavo ny fandinihana manontolo avy amin'i Sustainable Aero Lab, ao anatin'izany ny sarintany fanombohana sy ny famakafakana ny fampiasam-bola amin'ny renivola ho lasa teknolojia tsy misy emission, ao amin'ny tranonkalan'ny Lab www.fitohana.aero.